gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Internet Knowledge » gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ
1 gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ on 14th March 2010, 6:19 pm
gmail account တစ်ခုကို pop/ autoforward လုပ်ထားတယ် ဒါပင်မဲ့ သူက မေးတွေပဲပို့ပေးတာ off line message ချိန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ chat logs တွေကို မပို့ပေးဘူး chat logs ကမေးမဟုတ်လို့တဲ့ chat logs ကို ပို့လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းများသိရင်ပြောကြပါ
နောက်တစ်ခုက မေး ပို့တဲ့လူ IP ကိုကြည့်ချင်ရင် show original ထဲမှာ သူ IP ကို trace ပြန်လိုက် တာမလား မဟုတ်ရင်နည်းပြောပြပါ
ကျွန်တော် IP က 124.179.56.115 အဲ့ဒီ IP ကနေ မေး ၂ခုကိုအပြန်အလှန် မေးပို့တယ် နောက် ရှာပြီးကြည့်တော့ ဒီလိုထွက်လာတယ် IP2ခုက 10.224.103.69, 10.141.188.38 ရှာတော့ private IP
ကျွန်တော်ပဲလုပ်တာမှားနေတာလား ရှင်းပြဦးနော် ညီလေးတွေ အကိုတွေ ဦးကြီးတွေကူညီဦး
2 Re: gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ on 15th March 2010, 8:04 am
moeset wrote: gmail account တစ်ခုကို pop/ autoforward လုပ်ထားတယ် ဒါပင်မဲ့ သူက မေးတွေပဲပို့ပေးတာ off line message ချိန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေ chat logs တွေကို မပို့ပေးဘူး chat logs ကမေးမဟုတ်လို့တဲ့ chat logs ကို ပို့လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းများသိရင်ပြောကြပါ
Mail လောက်ပဲ ပို့ ပေးတယ်ထင်တယ်
moeset wrote: ကျွန်တော် IP က 124.179.56.115 အဲ့ဒီ IP ကနေ မေး ၂ခုကိုအပြန်အလှန် မေးပို့တယ် နောက် ရှာပြီးကြည့်တော့ ဒီလိုထွက်လာတယ် IP2ခုက 10.224.103.69, 10.141.188.38 ရှာတော့ private IP
Gtalk ကနေ IP ရှာတာတော့ သိမှာပေါ့..အဲဒီကပဲရှာပါလားဂျာ
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ဒီအောက်က နည်းနဲ့ 
မိမိဆီလာတဲ့ အီးမေးလ်ကို ဘယ်ကလာသလဲ ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ Gmail,Yahoo mail နဲ့ Outlook mail တွေမှာ ရှာကြည့်မယ်။
မိမိ သိလိုတဲ့ မေးလ်ကိုဖွင့်ပြီး ညာဘက်အပေါ်နားက reply botton ကိုရှာကြည့်ပါ။
credit>[You must be registered and logged in to see this link.]
3 Re: gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ on 15th March 2010, 8:09 am
IP ရှာတာ အရင်ကရတယ် အခုမှ 10. နဲ့စတဲ့ IP တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ထင်တယ် chatlogs ကိုရတယ်လို့ပြောကြလို့ သိရင်ပြောဦးနော် IP ကို gtalk ကနေမဟုတ်ပဲနဲ့ ဘယ်လိုရဦးမလဲ မသိအောင်လုပ်ပါတယ်ဆိုမှး(
4 Re: gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ on 15th March 2010, 8:34 pm
5 Re: gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ on 16th March 2010, 8:53 am
internet shop ကမဟုတ်ပါဘူး အိမ်မှာပါ auzi မှာပါ တားကိုပစ်မထားကြနဲ့လေ ကူညီပေးကြဦး
6 Re: gmail မှ chat logs ဘယ်လိုယူရပါသလဲ